सिलौटाले हानेर श्रीमतीको हत्या : RajdhaniDaily.com
Home प्रदेश सिलौटाले हानेर श्रीमतीको हत्या
सर्लाही । सर्लाहीका एक पुरुषले सिलौटोले टाउकोमा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. २ नवलपुर पुनर्बास घर भई हाल हरिवन नगरपालिका वडा नं. ११ रामबली साह तेलीको घरमा डेरा गरी बस्ने बिजयलाल कर्णले आफ्नै श्रीमती उषादेबी कर्णको हत्या गरेका हुन् ।
घरायसी विवादमा मसला पिस्ने सिलौटोले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन कुवँरले जानकारी दिए । उषाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । श्रीमती हत्या गर्ने कर्णलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा लिई अन्य अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको प्रहरी प्रवक्ता कुवँरले बताए ।
बिचार राकेश गुप्ता - February 2, 2021 0
अर्थ राकेश गुप्ता - July 23, 2020 0
प्रदेश १ राकेश गुप्ता - October 2, 2020 0
प्रदेश ३ राकेश गुप्ता - January 4, 2021 0
Breaking News राकेश गुप्ता - July 11, 2020 0
Editor-Picks राकेश गुप्ता - August 19, 2020 0
Breaking News राकेश गुप्ता - July 2, 2020 0
Breaking News राकेश गुप्ता - March 16, 2020 0
प्रदेश ४ राकेश गुप्ता - July 8, 2020 0
पोखरा । पोखरामा बिनामास्क हिँड्ने २१ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कास्कीले बुधबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका सबै...
प्रदेश ६ राकेश गुप्ता - December 17, 2020 0